‘आस्थाको भिन्नै स्वर’- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
‘आस्थाको भिन्नै स्वर’
काठमाडौँ — गायिका आस्था राउतको दोस्रो एल्बम ‘आधार भाग २’ सार्वजनिक भएको छ । एल्बमलाई बिहीबार राजधानीमा मह जोडी (मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य) संगीतकार सुरेश अधिकारी, गायक राजु लामा, आस्थाका बाबु तथा लोकगायक हरिबहादुर राउत र आमा सावित्री राउतलगायतले एल्बम सार्वजनिक गरे ।
कार्यक्रममा हास्य कलाकार हरिवंशले आस्थासँग आफूले फिल्म ‘छक्का पन्जा २’ गीत ‘झ्याम्म झ्याम्म...’ मा सहकार्य गर्न पाएको सम्झिँदै आस्थाको स्वर भिन्न रहेको दाबी गरे । ‘कसैको गीत सुनिरहँदा एउटै किसिम लाग्छ किनभने त्यस्तै स्वर अन्य गायकगायिकाको पनि हुन्छ,’ हरिवंशले भने, ‘तर आस्थाको स्वर अन्यमा पाइँदैन । परबाटै यो गीत आस्थाले नै गाएको हो भन्नेमा ढुक्क भइन्छ ।’ त्यस्तै कलाकार मदनकृष्णले कम उमेरमै आस्थाले नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा प्रगति गरेको दाबी गरे । ‘सांगीतिक वातावरणमा जन्मेर, हुर्केर होला, आस्थामा गायकीको नयाँ फ्लेभर पाइन्छ,’ उनले भने । आस्थाका बुबा हरिबहादुर कुनै बेला रेडियो नेपालमा लोकगीत गाउँथे भने आमा सावित्री गीतकार हुन् ।
संगीतकार सुरेश अधिकारीले आस्था जस्तोसुकै फ्लेभरको गीत पनि गाउन सक्ने प्रतिभाशाली गायिका भएको बताए । एल्बममा समेटिएको ‘को छ यहाँ’ बोलको गीतमा आस्थाकी आमा सावित्री राउतको शब्द रहेको छ । बाँकी ७ वटा गीतमा सुरेश अधिकारीको शब्द र संगीत छ । धार्मिक, संस्कृति, राष्ट्र भाव र रमाइलो गर्ने मुडका ७ वटा गीत समावेश रहेको राउतले बताइन् । लोक शैलीमा आधारित रहेको ‘नाकैमा फुली...’, गीतमा २०४० सालमा नै माधव केसीको संकलनमा उनका बाबु गायक राउतले गाएको ‘पानी खाने कलधारा कलको...’ गीतको अंशलाई समावेश गरिएको छ । ‘झलझल गर्ने कम्पनी माला...’, ‘राम साइली...’ बोलको गीतलाई पप फ्लेभरमा सुन्न सकिन्छ । त्यस्तै अर्को ‘सिमाना...’, ‘को छ यहाँ...’ गीतहरू राष्ट्रिय भावनाले भरिएका छन् । एल्बममा नै समावेश ‘हवाईजहाजको टिकट...’ गीतमा भावुकता मिसिएको छ भने ‘दसैं आयो तिहार आयो...’ मा पर्व र संस्कृतिलाई समेटिएको छ ।
कार्यक्रममा ‘नाकैमा फुली’ गीतको भिडियो पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । सान थापाले निर्देशन गरेको भिडियोमा आँचल शर्मा र महेश खड्काले अभिनय गरेका छन् । हाल टेलिभिजन गायन रियालिटी सो ‘दी भ्वाइस अफ नेपाल’ सिजन २ को एक निर्णायकसमेत रहेकी आस्थाको पहिलो एल्बम ‘आधार’ का गीतहरू ‘खै त मलाई झुम्के बुलाकी’, ‘चौबन्दीमा पटुकी बाँध्य छैन भन्दैमा...’ चर्चित गीत छन् । रिमिक्स गीत ‘सालको पात टपरी गाँसेर...’ बाट उनको करिअर सुरु भएको थियो । गायिका राउतले आफू फलभन्दा पनि कर्ममा विश्वास राख्ने भएकाले संख्यात्मकभन्दा गुणात्मक गीत पस्किन सजक रहेको खुलाइन् । दुई/तीन वर्षको अथक प्रयासपछि आएको आफ्ना नयाँ गीतहरूले मुलुकको मौलिक संस्कृति प्रवर्द्धनमा सघाउने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् ।
प्रकाशित : मंसिर १३, २०७६ ०९:२६
काठमाडौँ — त्रिमूर्ति निकेतनले नाट्यसम्राट् बालकृष्ण समको महत्त्वपूर्ण दस्तावेज लेखनका साथै सात दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाली भाषासाहित्यमा सक्रिय रहेबापत् साहित्यकार प्रा.डा. तारानाथ शर्मालाई एक लाख रुपैयाँसहित ‘बालकृष्ण सम पुरस्कार’ प्रदान गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै, नेपाली भाषामा आधुनिक कथा र उपन्यास सृजनाका लागि साहित्यकारद्वय गीता केशरी र पद्मावती सिंहलाई संयुक्त रूपमा ‘नेपाली साहित्य नारीरत्न’ को सम्मानसहित पुरस्कृत गर्ने भएको छ । पुरस्कारमा ताम्रपत्रसहित एक लाख रुपैयाँ रहेको छ । चित्रकार राजन काफ्ले र समाजसेवी श्रीगोपाल महर्जनलार्ई ‘सत्यमोहन जोशी शताब्दी पदक’ समर्पण गर्ने निर्णय भएको त्रिमूर्तिका सदस्य सचिव नरेन्द्रराज प्रसाईंले जनाएको छ । त्यस्तै त्रिमूर्ति निकेतनमा क्रियाशील मोहनकृष्ण सापकोटा र ढण्डुराज घिमिरेलाई ‘त्रिमूर्ति सेवा पदक’ दिइने बताइएको छ ।
दस हजार रुपैयाँसहितको ‘भद्र घले पदक’ विश्व नारी नेपाली साहित्य सम्मेलनका संयोजक प्रा.डा. गार्गी शर्मालार्ई समर्पण गरिने विज्ञप्तिमा छ । घलेका सम्मानमा स्थापित यो पदक यसअघि शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी, रामबाबु प्रसाईं, डा.मोदनाथ प्रश्रित, प्रा.ठाकुर पराजुली, केके कर्मचार्य, हरिहर विरही, सलोमी लेप्चालगायतले पाइसकेका छन् । त्रिमूर्ति निकेतनका संस्थापक तथा अध्यक्ष इन्दिरा प्रसाईंको अध्यक्षतामा बसेको साधारणसभाले पुरस्कार र पदकसम्बन्धी निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
त्यस्तै, त्रिमूर्ति निकेतनको सदस्यमा साहित्यकार भगवती बस्नेत, यादव भट्टराई र ललिता दोषी मनोनीत भएका छन् भने नइ प्रकाशनले पनि साहित्यकार पुष्पा थापा र तोयानाथ ओडारीलाई नइ प्रकाशनको सदस्यमा मनोनीत गरेको छ ।
प्रकाशित : मंसिर १३, २०७६ ०९:२४